विदेशमा स्वदेशी मुद्रा छाप्नुका पछाडि यस्ता छन् नागरिकले जान्नैपर्ने तथ्यहरु
scheduleशुक्रवार चैत्र २१ गते, २०७६
एजेन्सी । पछिल्लो हप्ता लाइबेरियाको सरकारलाई करिब दश करोड ४० लाख डलर घाटा भएको खबर बाहिर आएको थियो । त्यसको कारण उसको नगद रुपयाँ गायब भएको बताएको थियो ।
लाइबेरियाको केन्द्रीय बैंकले विदेशस्थित प्रिन्टिङ प्रेसलाई ती नोटहरुको छपाई गर्ने काम सुम्पिएको थियो । ती नोटहरु जब देशको मूख्य बन्दरगाहबाट हवाईअड्डासम्म ल्याइरहेको थियो त्यही समय हराएको थियो । लाइबेरियाको सरकार यस मामिलाको छानवीन गर्दैछ । पछिल्लो महिना हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले विदेशमा नोट छाप्ने योजनामाथि त्यहाँका जनताहरु आक्रोशित भएका थिए ।
यी दुवै मामिलाबाट हाम्रो पैसा कहाँ छापिरहेको छ भन्ने सवाल बाहिर आएको छ जुनबारेमा हामी सचेत रहन आवश्यक छ ।
केही देशहरु जस्तै भारत आफ्नो नोट आफ्नै देशमा छाप्ने दावी गर्छ र अमेरिका पनि कानुनतः मुद्रा आफै छाप्न बाध्य छ तर केही देश भने आफ्नो नोट विदेशमा छाप्नु सामान्य मान्दछ । यदि लाइबेरियाको कुरा गर्ने हो भने उसँग त मुद्रा छाप्ने आफ्नै केन्द्र नै छैन ।
विश्वमा नोट छाप्ने धेरै ठूल्ठुला कम्पनी छन् । बैंक नोट बनाउने कम्पनी डे ला रुएको अनुसार व्यवसायिक प्रिन्ट बजारले कूल नगदको ११ प्रतिशतसम्म व्यापारिक तौरले छाप्छ । यस क्षेत्रमा नोट छाप्ने धेरै कम्पनी युरोप र उत्तर अमेरिकाको छ । वेलायती कम्पनी डे ला रुए विश्वको सबैभन्दा ठूलो नोट छपाई गर्ने कम्पनी हो ।
यो कम्पनी लगभग विश्वभरीका १४० देशको केन्द्रिय बैंकको नोट छाप्ने काम गर्छ । यसको प्रतिद्वन्द्धि जर्मनी कम्पनी गीसेक एंड डर्विएन्ट लगभग सय केन्द्रिय बैंकहरुको नोट छाप्ने काम गर्छ । यस बाहेक क्यानेडाको बैंकनोट कम्पनी र अमेरिका स्वीडेनको क्रेन कम्पनी यस क्षेत्रको ठूला कम्पनीहरु हुन् । यो एउटा ठूलो र गुप्त व्यापार हो ।
बीबीसीको अनुसार जब उसले ती कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर उसले नोट छाप्ने देशहरुको बारेमा प्रश्न गर्‍यो तब उसले त्यसबारेमा बताउन अस्वीकार गर्‍यो ।
नोटको छपाईको काम विदेशलाई सुम्पिनेबारे भारतीय जनताहरुको आक्रोशलाई देखेपछि यस्ता कुरा जनताका लागि संवेदनशिल विषय हो भन्ने बुझिएको छ ।
डरहम विश्वविद्यालयको पैसाको इतिहासका विशेषज्ञ डनकेस काँनोर्स भन्छन्,‘यो मानिसका लागि राष्ट्रियताको विषय बन्छ ।’
१. कुनै देश किन आफै नोट छाप्दैन
यो एउटा कठिन र निकै खर्चिलो प्रक्रिया हो । डे ला रुएले नोट छपाईको काम १८६० देखि शुरु गरेको हो । साना देशका लागि नोट छपाई विदेशमा गर्न तार्किकरुपमा सही हो । यदि कुनै देशलाई कम नोट चाहिएको खण्डमा त्यसको लागि प्रिन्टिङ प्रेसमा धेरै खर्च गर्नु सही विकल्प हुँदैन । यस्ता किसिमका प्रेसमा समय समयमा नयाँ र उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
२. साना देशका लागि राम्रो विकल्प
एक बैंकनोट प्रिन्टर एक वर्षमा एक अर्ब ३० करोड नोटको छपाई गर्छ । यदि कुनै केन्द्रिय बैंक यो भन्दा कम नोट छपाई गर्छ भने त्यो वित्तिय रुपमा उसको सही निर्णय साबित हुँदैन । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने उ प्रत्येक वर्ष सात अर्ब नोटको छपाई गर्छ । सोलोमन द्वीपको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ छ लाख जनसंख्या छ जसकारण उसको नोट पनि डे ला रुएले नै गर्छ । तर भारतले यस्तो काम गर्न आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चिन्ताजनक मान्दछ । विशेषगरी भारत र चीनबीच चलिरहेको सिमा विवादको बीच यसलाई अझ महत्वको साथ हेरिएको छ ।
३. लिबियाको घटना र नगदको कमी
लिबियाको उदारहण लिने हो भने सन् २०११ मा वेलायती सरकारले १ अर्ब ८६ करोड दिनर लिबियालाई पठाउन रोकिदिएको थियो । त्यसभित्र एक करोड ४० लाख पाउण्ड डे ला रुएले छापेको थियो । जसको परिणामस्वरुप कर्णेल गद्दाफीको सत्ताको अन्तिम चरणमा लिबियामा नोटको कमी भएको थियो । यस्तो स्थितिमा विदेशी सरकार कहिले काँही नोटको वितरण रोकिदिन्छ । यद्यपी यस्तो परिस्थिती एकदमै दुर्लभ हुन्छ । लिबियाको यो घटनाले इंडस्ट्रीलाई अचम्म बनाएको थियो । यद्यपी नोटको छपाई गर्ने व्यवसायलाई यसले खासै असर पारेन ।
सैंदान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने कुनै देशबाट प्राप्त हुने छपाईको निर्देशनभन्दा धेरै छपाई गरेर देशको अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर गर्न सकिन्छ । मुद्राको अधिकता अर्थव्यवस्थामाथि नराम्रो प्रभाव पुर्‍याउन सक्छ र मुद्रास्फीतिको अवस्था सृजना हुनसक्छ । यसबाट अर्को जोखिम भनेको विदेशी शक्तिलाई आफ्नो नोटको सुरक्षा गुणको बारेमा जानकारी मिल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जाली नोटको खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपी यस्ता घटनाका प्रमाण अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन ।
जुन देश आफ्नो मुद्राको छपाई विदेशमा गर्छ उसको लागि विश्वास ठूलो विषय बन्नसक्छ । यस्ता देशहरुमा उच्च स्तरमा भ्रष्टाचारको पनि आशंका रहन्छ । यद्यपी अधिकांश देश आफ्नो नोटको छपाई आफै गर्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा संघका प्रवन्धक गियामे लिपेक भन्छन्,‘कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय नियामक यस्तो किसिमको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्दैन ।’
४.के भविष्यमा मुद्रा यति आवश्यक छ ?
अहिले मानिसहरु मुद्राको प्रयोग अपेक्षाकृत कम गर्छन् । धेरैवटा एप्लीकेशन र भूक्तानीको तरिका भएको कारण नोटको प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ । चीनको विचैट नामको मैसेजिङ र पेमेन्ट एप्लीकेशन निकै लोकप्रिय छ । चीनको पिपूल्स बैंकको अनुसार सन् २०१६ मा मात्र १० प्रतिशत रिटेल भुक्तानी मुद्राको मार्फत भएको थियो ।
अन्तर्वार्ता, अर्थ / व्यापार, विशेष
कोरोना नियन्त्रण कोषमा आयल निगमको ५० करोड
दूध बिक्री गर्नसमेत कठिनाइ भएपछि…
कुमारी बैंकद्वारा १० लाख सहयोग
मापदण्ड बनाएर राहत सामग्री वितरण गरिने
यी हुन् प्रभु बैंकका आज खुल्ने शाखाहरु
पत्रकार महासंघलाई अबिलम्ब माफी माग्न प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
काठमाडौं, २० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेपाल पत्रकार महासंघलाई अबिलम्ब माफी माग्न...
भारतमा कोरोना भाइरसः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
काठमाडौँ, २१ चैत । भारतमा कोरोना भाइरसका कारण विहीबारमात्रै १४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या...
चीनका वैज्ञानिकको दाबी-अबको ४ हप्तामा विश्वमै कोरोना संक्रमण दर शून्यमा झर्छ
एजेन्सी, २० चैत । चीनका वैज्ञानिकले अबको ४ हप्तामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर शून्यतिर झर्ने दावी गरेका छन् । चीनका वरिष्ठ...
विश्वभर कोरोना भाइरसः संक्रमितको संख्या १० लाख नाघ्यो, ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौँ, २१ चैत । विश्वभर कोरोना भाइरसको कहर मच्चिरहेको छ । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार भाइरसबाट संक्रमितको संख्या १० लाख १४...
कोरोना भाइरसः फ्रान्समा एक दिनमै १३५५ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ, २१ चैत । कोरोना भाइरसका कारण फ्रान्समा एक दिनमै १३५५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यो एकदिनमा हालसम्मकै सबैभन्दा...